परीक्षण घटाइँदै, जोखिम झन् बढ्दै « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 8 July, 2020 7:24 am
काठमाडौं, २४ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि आधिकारिक मानिएको आरटी–पिसिआर परीक्षणको दायरा घटाएसँगै संक्रमितको संख्या पनि कम देखिएको छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले विदेशबाट चार्टर फ्लाइटमा आइरहेका व्यक्तिलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा नराखिँदा उनीहरु घरमा पुगेपछि परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिने गरेको बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा एकदम न्यून मात्रामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ । जति धेरै परीक्षणको दायरा बढायो, त्यति धेरै संक्रमितको पहिचान हुन्छ ।’
काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार थप २८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा थप २८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको बताए ।
मंगलबार मात्रै काठमाडौंमा १४, ललितपुरमा १० र भक्तपुरमा चार जनालाई संक्रमण देखिएको छ । योसँगै हालसम्म काठमाडौंमा १७४ जना, ललितपुरमा ४९ र भक्तपुरमा ४३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा हालसम्म २ सय ६६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
मंगलबार देशभर थप २ सय ४ जना संक्रमित थपिएका छन् । संक्रमितमध्ये ८ हजार ६ सय ३४ जना आइसोलेसनमा छन् । यस्तै, २५ हजार ७ सय २७ जना क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् ।
हालसम्म २ लाख ६१ हजार ८ सय ६१ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, हालसम्म संक्रमितमध्ये ७ हजार ४ सय ९९ जना डिस्चार्ज भएका छन् । राजधानी दैनिकबाट